Xaaska qarsoon Ee Putin oo cunaqabatayn lagu soo rogayo – Idil News
Xaaska qarsoon Ee Putin oo cunaqabatayn lagu soo rogayo
Posted By: Idil News Staff May 7, 2022
Tan iyo markii uu bilawday duullaanka Ukraine, Ruushka ayaa waxa laga mamnuucay Mareykanka iyo dalal badan oo Yurub ah. Cunaqabatayntan ayaa ah mid dhaqaale, ganacsi iyo mid siyaasadeed.
Ilaa hadda, xayiraadahan waxaa lagu soo rogay oo keliya madaxweynaha Ruushka Putin, saaxiibbadiisa dhow, madaxda Ruushka iyo gabdhaha Putin, balse hadda Elina oo loogu yeero ‘Marwada Koowaad ee Qarsoon’ ee Ruushka.ayaa sidoo kale la sheegay in lagu soo dari rabo liiska dadka uu midowga Yurub mamnuucay.
Elena waxaay ku guuleystay bilad dahab ah ciyaarihii Olombikada Athens 2004. Wuxuu bilaabay jimicsiga caadiga ah iyadoo 13 jir ah waxayna ku guuleystay horyaalkeedii ​​​​ugu horreeyay ee adduunka sannadkii 1998-dii.
Tan iyo markaas waxay ku guuleystay billado dhowr ah waxaana ka mid ahaa koobabkii sannadadii 2001 iyo 2002 ee Horyaalkii Yurub. Waxa ay sidoo kale ku guuleystay dhowr koob oo adduunka ah sannadkii 2003.
Elena waxa ay siyaasadda Ruushka ku soo biirtay sannadkii 2005-tii, xilligaas oo magaceeda lala xidhiidhinayey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
Waxaa sidoo kale loo doortay Xisbiga Midnimada Ruushka ee Duma , oo ah aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka. Sannadkii 2014, waxa lagu sharfay inay ka mid noqoto dhawr ciyaartoy oo sitay tooshka Olombikada Olombikada Sochi.